Cirro oo ku hanjabay inay ficil kaga jawaabi doonaan xadhiga masuulliyiinta Xisbigiisa
Home WARARKA Cirro oo ku hanjabay inay ficil kaga jawaabi doonaan xadhiga masuulliyiinta Xisbigiisa
Hargeysa(Berberanews)-Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa daboolka ka qaaday inay jawaab celin ka bixin doonaan tallaabo uu sheegay in xukuumaddu ku ugaadhsanayso Masuulliyiinta Xisbigiisa.
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani wuxuu sheegay inay soo noqnoqdeen dhawaanahan dhacdooyin khalkhal gelin kara ammaanka iyo doorashadaba, ” Waxaa ugu horeeya xadhiga joogtada ah ee saraakiisha waddani heerkasta, tobankii cisho ee u dambeeyay waxaa la xidhay 20 masuul oo weli qaarkood xabsiga ku jiraan, xisbigu wuu dulqaatay, isagoo duruuftiisa eegaya, laakiin waxaan u sheegaynaa in xisbigu ka falcelin doono hadday dhacdooyinkaasi soo noqnoqdaan.”
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani waxaa uu daboolka ka qaaday inay gacanta shacabka ku soo celin doonaan hanti kasta oo ummadda ka dhaxaysay oo aan sifo sharci ah marin, haddii xisbigiis aloo doorto hoggaanka dalka, isagoo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi, “Somaliland xannuuno badan Kulmiye ka qaadday, waxaa ka mid ah aaminaadii oo ka dhimatay cidday xilka u dhiibtaan. Kulmiye beriguu mucaaridka ahaa, waan xasuustaayo laba hadal oo Riyaale bixiyay waxay sammayn jireen. Haddaad Xisbiga Waddani doorataan, waxaan u ballanqaadaynaa nay ammaanada ay noo dhiibteen aanu ilaalino oo ay ugu horrayso hantidiisa, waxaannu ballanqaadaynaa inaanu ka daba tagno hanti kasta oo sifo aan sharci ahayn lagu qaatay inaanu gacanta shacabka ku soo celin doon.”
Waxaannu halkan idiinku soo gudbinayaa khudbadda Guddoomiyaha Xisbigaas oo ka hadlay xaflad loo sammeeyay taageerayaal cku soo biiray.
Previous articleGuddoomiye Cirro oo Hada Baaq Nabaddeed u Direy Beelo Dirir Ku Dhex-martay Deegaanka Ceel-Afweyn
Next articleKomishanka oo ganaax maaliyadeed iyo Digniin ku soo rogay Xisbiyada Kulmiye iyo Waddani